Ny fiambenana fahavaratra UK dia tokony hitandremana
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Ny fiambenana fahavaratra UK dia tokony hitandremana
Ny seacations dia manana tombony lehibe hanehoana ny fomba fiarovana ny fitsangantsanganana an-tsambo ary hiteraka fifampitokisana eo amin'ireo mpandeha
Ny seacations dia afaka mamporisika ny famandrihana bebe kokoa momba ny fitsangantsanganana iraisam-pirenena amin'ny faran'ity taona ity
Ny fihenan'ny COVID-19 amin'ny sambo dia mety hampihena ny fahatokisan'ny mpandeha
Ny fotodrafitrasa ifampizarana dia midika fa mety hitera-doza mora foana ny fitsangantsanganana an-tsambo
Maro ireo mpandraharaha fitsangantsanganana an-dranomasina no nitsambikina nanararaotra nanararaotra ny firongatry ny fialantsasatra an-trano tany UK tamin'ny alàlan'ny fanolorana 'seacations'. Ny hetsi-diso toa ny fiatoana COVID-19 eny ambony sambo dia mety hampihena ny fahatokisan'ny mpandeha ary hisy fiatraikany amin'ny fidiram-bola tena ilaina. Na izany aza, raha vita tsara, ireo tolotra ireo dia mety hampirisika ny famandrihana avo lenta kokoa ho an'ny dia iraisam-pirenena amin'ny faran'ity taona ity ka hatramin'ny 2022.
Ny seacations dia manana tombony lehibe hanehoana ny fomba fiarovana ny fitsangantsanganana an-tsambo ary hiteraka fifampitokisana eo amin'ireo mpandeha. Ity dia ho fanomezan-toky tena ilain'ny olona taorian'ny nilatsahan'ny fahatokisan'ny mpanjifa tamin'ny taona 2020. Hetsika an-tsaina ihany koa ny fisokafana amin'ny tsena anatiny, satria 78% ny mponina ao Angletera dia nanamarika fa tsy hampihena ny dia an-trano amin'ny "ara-dalàna vaovao" aorian'ny famongorana ny fameperana. , hoy ny fanadihadiana natao farany.
Na izany aza, tsy misy toerana firy amin'ny tsy fahombiazana eto. Ny isan'ireo fotodrafitrasa ifampizarana dia midika fa mety hitera-doza mora ny famindrana viriosy, ary ny fiarovana COVID-19 no lakilen'ity asa ity. Ny fomba fanao fiarovana sy ny fepetra takiana amin'ny mpandeha toy ny vaksinina na porofom-panadinana ratsy dia ilaina tokoa.
Ny fangatahana porofo momba ny vaksiny dia safidy mora hamahana ny olan'ny valanaretina eny an-tsambo ary hisorohana loza lehibe. Na izany aza, io dia mety hanaporofo fa tsy mahomby satria tsy azo antoka hoe firy ny olona hanao vaksiny feno amin'ny fahavaratra. Ankoatr'izay, ity dia mety hanilika ny famandrihan'ny mpianakavy, izay sarobidy amin'ireo mpandraharaha fitsangantsanganana an-tsambo.
Na eo aza ny fanahiana dia fotoana tsara hanararaotan'ny mpandeha fitsangantsanganana an-tsitrapo UK fitsangatsanganana indray izany ary hanamafisana ny volan'ny orinasa mpitsangantsangana. Horaisina an-tanan-droa ny fampiasana ireo sambo aorian'ny fandaniam-bola be amin'ny fametraham-bola ary miteraka fatiantoka ara-bola amin'ny 2020.
Southwest Airlines dia nandidy fiaramanidina Boeing 100 MAX miisa 737 sahiran-tsaina
Niverina tany JFK ny United Airlines niaraka tamin'ny sidina amoron-dranomasina